निद्रा लाग्दैन ? यी सात उपाय अपनाइ हेर्नुस् त ! – देशसञ्चार
हाम्रो शरीर एउटा प्रक्रियामा चलेको हुन्छ। सूर्य उदाएपछि दिन शुरु भएजस्तै मानिसको शरीर पनि चल्न शुरु हुन्छ। सूर्य अस्ताएसँगै शरीरले पनि आरम खोज्छ। दिनभरी चलायमान भएको शरीर रातमा आराम गरेर भोलिपल्ट फेरि सक्रिय हुन्छ, यसको लागि मानिस निदाउन जरुरी छ। भनिन्छ, एक स्वस्थ मानिसलाई ६ देखि ८ घण्टा निदाउनु पर्छ। मानिसको निन्द्रालाई मोबाइलसँग दाजेर भन्ने हो भने, निदाउनु भनेको रिचार्ज गर्नु हो।
तर कतिपय मानिसलाई निन्द्रा नलाग्ने समस्या हुन्छ। सुत्ने समयमा निन्द्रा नपर्नु, निन्द्रा परेपनि राति बिउँझनु र फेरि सुत्न नसक्नु, बिहान अति चाँडै आँखा खुल्नु अनिन्द्राको लक्षण हुन्। हुन त उमेरले ३० नाघेपछि अनिन्द्राको समस्या हुन्छ भन्ने डाक्टरहरु बताउँछन्। तर अनिन्द्राले विभिन्न समस्या ल्याउन सक्छ। अनिन्द्राको समस्या कम गर्न यस्तो तरिका अपनाउन सकिन्छ:
अनिन्द्राको उपचार आफू निदाएको समयको तथ्यांक राख्नु पनि हो। तपाईँ कहिले ओच्छ्यानमा जानुहुन्छ, निदाउन कति समय लाग्छ, कि रातभर अनिदो बस्नुहुन्छ? यदि यो सबै क्रियाकलापको तथ्यांक राख्नुभयो भने तपाईलाई आफ्नो बानी थाहा हुन्छ र यसलाई परिवर्तन गर्ने बाटो पनि। यसले हामीलाई निगरानी गरेको चिकित्सकलाई पनि सहयोग हुन्छ।
कार्तिक २५, २०७५ मा प्रकाशित